Nzira yekuwana zvakadini backlinks yewebsite yako ne mazano anobasa?
Vose vanobvisa webhusaiti vanga vanoda kuvandudza mararamiro avo vari kutsvaga nzira dzekuwana backlinks dzewebsite dzavo. Nhaurirano dzinopinda inokosha zviitiko zvewebsite yako inotarirwa uye mavhoti emagetsi ako. Kuvakwa kwekugadzira ndeyekugadzirisa hutano hutsva hunoenda kune dzimwe nzvimbo dzakasangana nemaiti nechinangwa chokusimudzira simba rechirwere uye kukwezva mamwe magwara kune iyo yakabatana - property appraisal cost edmonton.Sangano rekuvaka sangano rinoreva kure-peji nekugadzirisa uye rinofanira kuitwa mushure mekushandurwa kwewebsite uye kushandiswa kwekugadzirisa, huwandu hwehuwandu hwekugadzira, uye unoshandiswa-user. Apo zvose zviri pa-page kukwanisa nzira dzakagadzirwa, inguva yekuratidza nzvimbo yako kune vakawanda vakateerera. Chivakwa chekubatanidza chakafanana zvikuru neshoko remuromo, izvo zvinopindirana pamwe nehuwandu hwemashamba ekutengesa.
Kuumba zvese zvakasununguka hazvigoneki. Saizvozvowo, ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuziva zvimwe zvacho zvekare backlinks zvinoenderana nehuwandu hunosanganisira:
Rugwaro rwako rwekunyorera runofanira kutarisa zvisikwa uye runofananidzwa nehurukuro inogadzirisa uye izwi rako rinotarirwa.
Nyaya dzakapoteredza backlink yako inofanira kunge yakagadziriswa inobatsira uye inobatsira. Vashandi havafaniri kukwezva sekutengeserana.
Nhamba yezvibatanidza zviri mukati peji rinobatanidza kune rako.
Chiremera chekubatanidza peji uye mukurumbira.
Nzvimbo yekubatanidza PageRank.
Uyezve, unofanirwa kugara uchifunga nezvezvinhu zvinotevera paunenge uchisangana newebsite yako:
Zvokudzokera shure kwako zvinofanira kuvakirwa pane nzvimbo dzakawanda kuratidza Google kuti zvinyorwa zvako zvinokosheswa nenhamba yevanhu vakasiyana. Uyezve, nekusika mazano kune dzimwe nzvimbo, unovandudza hukama hwako uye huita kuti huve huzhinji.
Kuenzanisa pakati pezvikwata zvekufambisa uye zvemashure
Chokwadi, link juice kune zvakabatana. Zvisinei, kuumba hupenyu hune utano uye huri kutarisa backlink profile, unoda kubudisa zvose dofollow uye nofollow kunze kwehukama.
Unofanirwa kuumba magwaro anchor akasiyana siyana. Uyezve, zvinyorwa zvako zvekunyorera hazvifaniri kutarisa zvakafanana nezita rako rekodzero kana kuti chinangwa chinyorwa. Ramba uchitarira kuti magwaro akafanana anchor angangodaro akuvadza mukurumbira wako uye anoita kuti chirango cheGoogle chivepo.
Pamberi pehutano hukuru hweGoogle muna 2012, vese webmasters vakaita shanyo pamusoro pehuwandu hwehukama hunosvika panzvimbo pehutano hwavo. Zvisinei, kana purogiramu yeGoogle Penguin yakatanga kuitika, maitiro ose ekare-mafuti e-SEO ekugadzirisa maitiro haana kushanda.
Saka, ngationei kukurukura maitiro ekutora backlinks kwewebsite yako nenzira yakasikwa:
Iwe vanogona kuwana kugadziriswa kwemasangano kuburikidza nekukurukurirana chete nenzvimbo yakasangana yakakwirira yeZP uye nekukurukurirana navo matanho enyu ekuvakisa matanho. Zvisinei, iwe unofanirwa kuva wakagadzirira kuti unogona kusvika kune vakawanda vanoita webhusaiti uye nekuda kwekuregererwa navo kana kugamuchira mhinduro isina kunaka. Iwe unogona kutarisa simba remasiti ane niche akabatanidzwa anoshandisa Semalt Web Analyzer kana Majestic.